Nordhoff၊ Sebastian; Hammarström၊ Harald; Forkel၊ Robert; Haspelmath၊ Martin, eds. (2013)။ "Southern Burmish"။ Glottolog။ Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology။
မောင်ခင်မင် (ဓနုဖြူ) (မေ ၂၀၀၉). "မြန်မာဘာသာစကား၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာများ". ပညာတန်ဆောင်မဂ္ဂဇင်း အတွဲ ၅၈၊ အမှတ် ၅.